प्रत्येक गृह कार्यालयलाई एक आवश्यक छ! | Martech Zone
एक बर्ष भन्दा अघिको (२०० 2005) मैले छेउमा कम्तिमा परामर्श गरिरहेको थिएँ र यसलाई ह्यान्डल गर्न घरका वरिपरि केही नयाँ हार्डवेयर लिन आवश्यक पर्‍यो। मैले नयाँ कम्प्युटर, नयाँ नेटगियर वायरलेस राउटर र वायरलेस कार्डहरू खरीद गरें ... र सबै भन्दा राम्रो लगानी मेरो लिंकस्टेशन थियो।
लिंकस्टेशनले मेरो वायरलेस राउटरमा सिधा जडान गर्दछ र २G० जीबी स्पेस छ। लिंकस्टेशनको लागि प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस वास्तवमै सरल छ ... म मेरा प्रत्येक बच्चाहरू, मेरो कम्प्युटर, केन्द्रीय संगीत डाइरेक्टरी, र ग्राहक ब्याकअपको लागि ड्राइव सेट अप गर्न सक्षम भयो। लिंकस्टेशन एक USB आउटलेटको साथ पनि प्रिन्टर, FTP सफ्टवेयर, र मिडिया स्ट्रिमि software सफ्टवेयर साझा गर्न आएको थियो। यसले मलाई मेरो प्रिन्टर कम्प्युटरबाट टाढा र कहिँ सुविधाजनकमा राख्न अनुमति दिन्छ।
मेरो मनपर्ने सुविधा, यद्यपि मेरो पीसीहरू र एक नेटवर्क स्रोतमा धेरै ठाउँ छ। जब जब म प्रोजेक्ट सक्दछु, म त्यहाँ प्रतिलिपि गर्छु। जहिले पनि मैले सफ्टवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्थें, मैले त्यहाँ प्रतिलिपि बनाउँथें, र जब म कम्प्युटरहरू बिच सामानहरू साझेदारी गर्न चाहान्थें - हामी केवल ती सबैको बीचमा फाईलहरू फाँटमा पास गर्दछौं। कुनै 'फोल्डर सेयर', कुनै स्थापना डिस्कहरू, कुनै समस्या छैन।
लगभग months महिना पहिले, मेरो पीसी बिल्कुल एक नोर्टन एन्टिभाइरस अपडेटद्वारा होज गरिएको थियो जुन बुट सेक्टरलाई खारेज गर्‍यो। मैले ड्राइभको पुन: फर्म्याट गर्नुपर्‍यो र सबै चीजहरू स्क्र्याचबाट पुन: लोड गर्नुपर्‍यो। यो मेरो अपवादको साथ एक निरपेक्ष दुःस्वप्न हुन सक्छ सबै नेटवर्क ड्राइभहरूमा लोड भयो। म एक दिन वा मा फिर्ता आयो र एक हरा याद गरेन।
डेढ बर्ष पछि र अब मेरो ग्राहकहरु मध्ये एकले मलाई उसको लागि दोहोरिएको विश्लेषण गर्न भन्यो। यो यति लामो भयो कि मसँग अब अनुप्रयोगहरू लोड भएको छैन। पछिल्लो सप्ताहअन्तमा, म शेयरमा उफ्रिनुभयो र अनुप्रयोगहरू पुन: लोड गर्नुभयो। यस सप्ताहअन्तमा, मैले पुरानो विश्लेषण डाउनलोड गरें र आज दिउँसो विश्लेषण ढकढकाउन सक्षम भएँ। अनुप्रयोगमा मलाई पुन: शिक्षित गर्नु सबैभन्दा कठिन पक्ष थियो!
त्यसोभए - यहाँ पेशेवरहरू र एमेच्योरहरूको लागि केहि सल्लाहहरू छन् जुन उनीहरूको कम्प्युटरहरूमा धेरै काम गर्दछन्।
नेटवर्क भण्डारण उपकरणमा लगानी गर्नुहोस्।
नेटवर्क भण्डारण उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक अवसर तपाईले पाउनु भएपछि, तपाईले गर्नु भएको काममा कपि गर्नुहोस्।
सफ्टवेयर स्थापनाहरू, अपडेटहरू, ड्राइभर अपडेटहरू, र साझामा क्रम संख्या पनि प्रतिलिपि गर्नुहोस्। यसले सबै चीज सुरक्षित रूपमा दुई स्थानमा राख्दछ।
नेटवर्क भण्डारणको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि त्यहाँ कुनै ब्याकअप छैन र आवश्यक समयको पुनः भण्डार गर्नुहोस् ... केवल ड्राइवमा फाईलहरू प्रतिलिपि गर्नुहोस्, धेरै छिटो यस तरिकाले। (मसँग यसमा मेरो पीसीहरूको प्रत्येकको ब्याकअप छ)।
र यदि तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ भने, म्याकले यो पनि राम्रो देख्छ! साझा गरिएको प्रिन्टर पनि!
टैग: जगेडालिंकस्टेशनभण्डारण उपकरण
डिसेम्बर १, २०१42006:२:9 अपराह्न
म पनि लिंकस्टेशन उपकरणको एक ठूलो प्रशंसक हुँ। मसँग १GB० जीबी संस्करण आफैंमा छ र यो लगभग २ बर्षदेखि कडा चलिरहेको छ। सब भन्दा राम्रो कुरा यो छ कि यसको उपकरण प्रकृति को कारण, वास्तवमा त्यहाँ कुनै रखरखाव वा हेरचाह र खानपानको आवश्यक छैन।
डिसेम्बर १, २०१42006:२:10 अपराह्न
मैले मेरो खरीद गरेपछि, मेरो एक साथीले 1Tb संस्करण खरीद गर्यो। म ईर्ष्यालु थियो! ऊ आफ्नो पनि माया गर्छ। म उत्सुक छु किन कसैले प्रिन्टर / हार्डड्राइभ / ताररहित राउटर बनाएको छैन।